साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह - टिटबिट - नारी
चलचित्र ड्रिमको सुटिङमा व्यस्त छु ।
भुवन केसीको ड्रिम्समा कसरी काम पाउनुभयो ?
१२ कक्षा सकेर बसेकी थिएँ । सानैदेखि अभिनयमा रुचि देखेर मामाले अफर गर्नुभएको हो । मेरा मामा यो चलचित्रको प्रोड्युसर हुनुहुन्छ पछि भुवन अंकलले स्टोरी सुनाउनु भयो, मलाई मन पर्‍यो र मैले स्वीकृति दिएँ ।
बाल्यकालमा के बन्ने इच्छा थियो ?
म हिन्दी तथा अंग्रेजी चलचित्र हेरेर त्यसको क्यारिकेचर गरिरहन्थें । ठूलो भएपछि कलाकार बन्छु भन्थें ।
करियरको सुरुवात कसरी भयो ?
फेस क्लासिक डायमण्डमा सेकेन्ड रनरअप भएपछि मेरो मोडलिङ करियर प्रारम्भ भएको हो ।
र्‍याम्प मोडलिङ, मुभी एवं म्युजिक भिडियोमध्ये कुन क्षेत्रमा रमाइलो लाग्यो ?
सबैभन्दा रमाइलो त मुभीमै लाग्यो ।
त्यसो भए साम्राज्ञीलाई नेपाली चलचित्रमा देखिरहन पाइने भयो ?
होइन, पहिले ड्रिम्सको परिणाम हेरौं । त्यसपछि मात्र निरन्तरता दिने कि नदिने निर्णय गर्छु ।
आफू कस्तो स्वभावकी युवती भएजस्तो लाग्छ ?
छिट्टै कसैसँग घुलमिल नहुने, बोलिनहाल्ने, छिट्टै रिसाउने स्वभावकी ।
दर्पण छाया, मेरो एउटा साथी छ, हाउसफूल आदि चलचित्र हेरेकी छु ।
मनपरेका कलाकार ?
प्रियंका कार्की, नम्रता श्रेष्ठ र अनमोल केसी ।
ड्र्रिम्सको नायक अनमोल कस्तो लाग्यो ?
काममा एकाग्र, नयाँ कुरा सिकौं भन्ने, फ्रेण्डली, सबैलाई सहयोग गर्ने, अभिनयकै लागि जन्मिएजस्तो ।
साथीहरू तथा मम्मीसँग घुम्न जान्छु, टिभी तथा मुभी हेर्छु वा बाहिर खान जान्छु ।
मलाई जंक फुड निकै मनपर्छ । जापानी सुसी पनि मनपर्छ ।
कस्तो गेटअपमा हिँड्न मन लाग्छ ?
क्याजुअल नै मनपर्छ तर ठाउँअनुसार एलिगेन्ट लुक्स पनि अपनाउँछु । मुडअनुसार पहिरन लगाउँछु ।
पुरुष : आरुष गुरुङ, नायक
तपाईंको नजरमा आमा ?
जननी, भगवान्को एक रूप ।
आदर्श महिला ?
झाँसीकी रानी ।
सहज लाग्ने महिला को–स्टार ?
रेखा थापा ।
तपाईंका लागि श्रीमती ?
जिउने आधार, सुख–दुख बाँड्ने साथी ।
कोही महिलाका लागि भगवान्सँग वरदान माग्न पाए ?
मेरी आमाको लामो आयु माग्थें ।
महिलाहरूको कमजोर पक्ष ?
छिट्टै विश्वास गर्ने, कुरा काट्ने अनि आँसु झारिहाल्ने ।
महिलाको कुन पक्षले आकर्षित गर्छ ?
पर्सनालिटी, व्यवहार अनि बौद्धिकता ।
मनपर्ने लेखिका ?
सिमोन द बउवार ।
प्रभावशाली महिला ?
मिचेल ओबामा ।
नारीमा भएको बलियो पक्ष ?
सहनशीलता एवं व्यवस्थापकीय कौशल ।
निरन्तर काम गरी सफलताको सिँढी उक्लन सफल उदाहरण हुन्–गायिका नित्यशिवा । सुमधुर आवाजकी धनी नित्यशिवा गायन क्षेत्रकी तारा हुन् । संगीतको राम्रो ज्ञान भएर पनि एक दशकपछि उनले ‘चाहना मनको’ पहिलो एल्बम बजारमा ल्याइन् । सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय हुनकै लागि सुनसरीबाट राजधानी प्रवेश गरेकी गायिका नित्यशिवाले चलचित्र गोरेदेखि भर्खरै बजारमा आएको गीत ‘फेसबुकको रन्को’ मा आवाज दिइसकेकी छिन् । उनले छोटो समयमै नौ वटा चलचित्र तथा विभिन्न म्युजिक भिडियोमा गीत गाएको बताइन् । महिला भएर गीत–संगीतमा लाग्नु हुँदैन भन्ने पारिवारिक अड्चन सहेकी नित्यशिवासँग संगीतमा जम्न निक्कै ठूलो संघर्ष गर्नुपरेको तीतो अनुभव छ । आगामी दिनमा गायन क्षेत्रमै समर्पित हुने उनको लक्ष्य छ ।
सगुन शाही, नायिका
जिम गर्न : मन पर्छ ।
सिमसिमे पानीमा भिज्न : मन पर्छ ।
आइस क्रिम : मन पर्छ ।
हेयर आइरन : मन पर्दैन ।
ककटेल : मन पर्दैन ।
अनमोल केसी : मन पर्छ ।
प्रियंका कार्की : मन पर्छ ।
बन्जी जम्पिङ : मन पर्छ ।
राति घुम्न : मन पर्दैन ।
सिंगापुर : मन पर्छ ।
वान पिस : मन पर्छ ।
सोसल नेटवर्क : मन पर्छ ।